Ukuveliswa kweZityalo eziXutywe yiChina kunye neFektri | UJusheng
Isityalo esiBumbeneyo seKhonkrithi
Ikhonkrithi yokubamba kunye nokuXuba iZityalo
Isiphathamandla seZixhobo zokuBamba eziPhathekayo
Umxube owomileyo woBume beKhonkrithi Batching
Isityalo esincinci seKhonkrithi esincinci
Isixhobo sokuLunga seKhonkrithi sokuLunga
Isityalo sokubambisa ikhonkrithi esiselfowuni uyilo olonyusiweyo lwe-trailer. Isiphatho sokubhabha, umxube wekhonkrithi, iisistim ezinobunzima, iscrow yokuhambisa kunye nesamente yesilili zidityaniswe kakhulu kwiyunithi enqwelisiweyo erhuqwayo, esisakhiwo esidibeneyo.Ukuze kuhlangatyezwane nokusebenza, ukusebenza kunye nokuxinana, isityalo sokubambisa ikhonkrithi esiphathwayo sangaphambi kokuba idityaniswe ngokupheleleyo ukusuka kumzi-mveliso, ocutha ixesha lofakelo kunye nokusebenza kwetyala kwisityalo sokubambisa sekhonkrithi.
Umba Iyunithi MHZS60
Imveliso yethiyori m³ / h 60
Iziphumo zomxhubi m³ 1.0
Uhlobo lokondla Ukondla kweBelt
Imodeli yeBatcher I-PLD1200-Ⅲ
Batcher (isixa semigqomo) m³ 12X2
amandla okuxuba kw 22X2
Ukuphakamisa amandla kw 7.5X2
Ukukhupha ukuphakama m 3.9
Ubunzima obukhulu kunye nokuchaneka Amanqaku ewonke ikg 2500 ± 2%
Izinto zepowder ikg I-600 ± 1%
Amanzi ikg 250 ± 1%
Izongezo ikg 20 ± 1%
Umba Iyunithi MHZS75
Imveliso yethiyori m³ / h 75
Iziphumo zomxhubi m³ 1.5
Imodeli yeBatcher I-PLD2400-Ⅲ
Batcher (isixa semigqomo) m³ 15x2
amandla okuxuba kw 30x2
Ukuphakamisa amandla kw 11x2
Ukukhupha ukuphakama m 3.8
Ubunzima obukhulu kunye nokuchaneka Amanqaku ewonke ikg 3000 ± 2%
Izinto zepowder ikg 800 ± 1%
Amanzi ikg Ama-350 ± 1%
1.Ukuyilwa kobume beCompact, kugxilwe kuninzi lwezinto zesitishi sokuxuba kwiyunithi enye yetreyila;
2.Imowudi yokusebenza yabantu, umsebenzi ozinzileyo nonokuthenjwa, ukusebenza okuzinzileyo kwiindawo ezahlukeneyo ezibukhali;
3. Ukungenisa umxube wekhonkrithi weTwin-shaft ongenisiweyo (isixhobo sokuxuba iiplanethi sinokusetyenziswa), esinokuqhuba ngokuqhubekekayo, sixube ngokulinganayo, kwaye sixube ngokuqinileyo nangokukhawuleza; inokugqitywa ngexesha elifutshane. Ngekhonkrithi eqinileyo, ikhonkrithi eyomeleleyo, iplastiki kunye nobukhulu obahlukeneyo bekhonkrithi, inokuxutywa kakuhle.
Umxhubi wekhonkrithi wamawele amabini
4. Isityalo sonke sinokuhanjiswa ngokukhawuleza siye kwindawo yokwakha kwaye siqokelelwe kwisiza ngefom exhonywe ngokupheleleyo;
5. Ukugunyazisa kwangaphambili kugqityiwe ngaphambi kokuziswa, kwaye ulwakhiwo lunokwenziwa ngaphandle kokuyalelwa;
6.Ukucwangciswa okunobunkunkqele, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, intshukumo ebhetyebhetye kunye elula, ukusebenza okulula nokuzinzileyo.
Olona lwakhiwo luphambili lwesityalo sekhonkrithi esenziwe ngokubhabha sahlulwe sangamacandelo amathathu: inkqubo yolawulo, umaleko wokudibanisa kunye nongqameko olunobunzima.
Umaleko wokuxubana wenziwe ngesakhelo sesinyithi kunye necandelo eliphindwe kabini eliguquliweyo elenziwe nge-I, elinobunzima kwaye elinobungqongqo kunye nokufunxeka okungcono kunesakhiwo esiqhelekileyo. ngesiseko, esinciphisa ngokufanelekileyo ukungcangcazela kumxube wekhonkrithi; Inkxaso yamkela imilenze yoxande, engekho lula kuphela kulwakhiwo, kodwa ibanzi nasendaweni.
Igumbi lolawulo lijikelezwe ziifestile, ezinxibelelene nomzimba ophambili wesityalo sokuxuba ikhonkrithi, kwaye zinokuyilwa ukuba zibe nobude obufanayo nobumaleko wokuxuba. Iqonga lokuhamba lomaleko wokuxuba lenziwe ngentsimbi yothango, ekulungeleyo ukujonga ngexesha elifanelekileyo kwimveliso kunye nokukhutshwa komamkeli oxubeneyo. Phambi kokuba ushiye umzi-mveliso, inkqubo yolawulo ilingisiwe kwaye ilungisiwe kwaye iqhagamshelwe zizidibanisi zokuhamba ngenqwelomoya, nto leyo enciphisa umsebenzi wofakelo lwesiza kunye namathuba okusilela. Akukho sidingo sokuphinda udibanise kwaye uqhagamshele iintambo xa uhambisa izixhobo.
Zimbini iipowder zokulinganisa ii-hoppers (isamente, uthuthu lwempukane), amanzi anesisindo se-hopper, i-admixture emibini yokulinganisa i-hopper kunye ne-hopper yangaphambi kokugcina isetiwe kubunzima bokulinganisa. Yonke into enobunzima isebenzisa izivamvo ezichanekileyo eziphezulu, ufakelo olula, uhlengahlengiso olululo kunye nokusetyenziswa okuthembekileyo. Imveliso ye-powder enesisindo se-hopper isebenzisa i-valve yomoya webhathane elawulwa ngokuzenzekelayo, uqhagamshelo oluthambileyo kunye nokuvalwa ngokupheleleyo kwamkelwa kwindawo yokungena kunye nakwivenkile. Le admixture Hopper onobunzima imiselwe ngaphezu Hopper amanzi weemitha, kwaye iplagi yamkela steel stainless valve ibhola ukukhupha umbandela.
Itotali yidosi eqokelelweyo okanye umlinganiso omnye wenqanaba le-elektroniki. Isamente, amanzi kunye nezongezo zinobunzima be-hopper ngomlinganiso ochanekileyo, ulawulo oluphakathi lwe-PLC, kunye nokusebenza okulula. Umdibaniso uhanjiswa kwaye wondliwe ngamabhanti. Nokuba ngumlinganiso we-aggregate, umgubo okanye amanzi, isantya sokulinganisa singaphezulu kwama-120 ngomzuzwana, kunye nokuchaneka nokuthembeka kwemilinganiselo kuqinisekiswa ziimpawu zokuchaneka okuphezulu. Ulawulo oluphakathi lwe-PLC, lunokuqhutywa ngokuzenzekelayo okanye ngesandla. Xa ikhompyuter yoshishino okanye i-PLC isilele ukulawula imveliso yesiqhelo yokuxuba, amaqhosha okusebenza ngesandla anokusetyenziselwa ukufezekisa ukusebenza ngesandla ukuthintela ukuphazamiseka kwemveliso. Umsebenzi ulula kwaye kulula ukuwulawula. Umboniso wepaneli oguqukayo unokuyiqonda ngokucacileyo imeko yokusebenza kwecandelo ngalinye, kwaye unokugcina kunye nokuprinta idatha yengxelo (ushicilelo lwesitayile, i-quadruplicate), ebonelela ngokulula kakhulu kulawulo lwesicwangciso semveliso. Ixhotyiswe ngeenkqubo ezimbini zokubeka iliso ngexesha langempela. Inqanaba lokuvelisa.
Izinto eziphambili zombane zomxhubi, umatshini wokujija, isivamvo sokulinganisa, izixhobo zolawulo lomoya kunye nenkqubo yolawulo zonke zizinto ezingenisiweyo, ezinganciphisi kuphela inqanaba lokungaphumeleli kwezixhobo, kodwa zikwaphucula ukuchaneka komlinganiso wezixhobo
Are Athini amacandelo esityalo sokuxuba esihambayo?
1 Umxhubi kwisisu semoto:
Isitya sokuxuba esine-cantilevered ye-injini ephambili, equlathe isikhonkwane setrektara kunye nomlenze wokupaka ilori; Isikali somlinganiso womxhubi, isamente kunye namanzi, umdibaniso kwisisu semoto Sijikeleze itafile yokujikeleza, ukuthuka njalo njalo.
Igumbi lolawulo 2:
Igumbi lolawulo lisezantsi kwesixhasi se-chassis, kwaye isityalo sokuxuba sifakwe ngaphakathi ngaphakathi ngaphakathi. Igumbi lolawulo lisebenza njengendawo yokuxhasa yangaphambili yesityalo xa sisebenza. Xa uhambisa okanye uhambisa, igumbi lolawulo ligciniwe kwaye ligcinwa kumngxunya webrakethi; yonke imigca yokulawula ayidingi kudityaniswa.
3 Umlinganiselo wobalo lulonke:
Le nkqubo ibekwe ekupheleni komva wesikhululo sokuxuba esishenxiswayo, icandelo elingaphezulu lilonke (isanti, ilitye) i-hopper yokugcina, i-hopper yokugcina inokwahlulwa ibe yi-2 okanye i-4, kwaye imise ibhodi ephezulu yokunyusa amandla okugcina, i-pneumatic ngokulandelelana vula ukusebenza komnyango, umlinganiso wobubanzi beentlobo ezahlukeneyo zokulinganiswa kwemathiriyeli.Amazantsi axhotyiswe ngebhulorho ehamba ngasemva kunye nemilenze yesakhelo yokusebenza.
Kwisisele sesamente kunye ne-screw conveyor, iinxalenye zepheripherithi ziyinxalenye ebalulekileyo ngaphandle kokusebenza okanye ukuthuthwa, ukuze zihanjiswe kwaye zidilizwe zizonke ngaphandle kokudilizwa.
▶ Zeziphi ezona mpawu ziphambili zesityalo esingqakayo sekhonkrithi?
Olona phawu lukhulu kukuba inokuhamba xa iyonke, okwangoku, isikhululo sokudibanisa ikhonkrithi eshukumayo ikakhulu sahlulahlulwe ngohlobo lokutsalwa kunye nohlobo lokutsala, uhlobo lokutsala isisu semoto luqulathe ibhulorho yangaphambili nangaphambili; I-chassis erhuqwayo ine-asi engasemva kuphela , kwaye isiphelo esingaphambili sibekwe kwibhulorho yesali yetrektara.
Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Inkqubo yokuDibanisa, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo,